Shiinaha FRP Bixiyaha Laba-Lakab-qeybiye iyo Warshad | Zhaofeng
Dab-celiyaha (dabka u adkaysan kara) tuubooyinka FRP ee ay soo saartay Hebei Zhaofeng Technology Protection Technology Co., Ltd. ayaa si weyn loogu isticmaalaa beeraha warshadaha kiimikada, awoodda dhuxusha, batroolka, ka saarista boorka electrostatic, iwm.
Dab-celiyaha (dabka u adkaysan kara) tuubooyinka FRP ee ay soo saarto Hebei Zhaofeng Technology Protection Technology Co., Ltd. ayaa si weyn loogu isticmaalaa beeraha warshadaha kiimikada, awoodda dhuxusha, batroolka, ka-qaadista boorka electrostatic, iwm. -ka -adkaysi) Tuubada FRP waxay dooran kartaa makiinadaha aasaasiga ah ee kala duwan sida dahaarka iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka Lakabka ayaa ka dhigaya inay leedahay iska -caabbinta daxalka oo aad u fiican, iska -caabbinta heerkulka sare, iyo caabbinta nabaad -guurka. Lakabka dhexe wuxuu qaataa fiber galaas dhalada wareegsan oo wareegsan si loo xoojiyo loona adkeeyo cadaadiska.
Waxa kale oo ay isticmaali kartaa shatiga madaxbannaan ee Hebei Zhaofeng si loogu sameeyo daaweyn liddi ku ah (tabinta) lakabka dhexe si loo sameeyo dhuumaha inay yeeshaan heer gaar ah oo ka-hortagga ma guurtada ah. Lakabka sare wuxuu ka samaysan yahay dabka u adkaysta oo dib-u-celiya ololka dhismaha jaakadda jel, kaas oo ka ciyaara doorka dabka iyo ololka dabka. Waxa kale oo aad ku dari kartaa wakiilka ka-hortagga shucaaca, wakiilka ka-hortagga gabowga, boodhka u adkaysta (CSI) iyo waxyaabaha kale ee lagu daro si loo gaaro waxqabadka gaarka ah ee ay macaamiishu u baahan yihiin.
Sidoo kale, rakibidda tuubbooyinka FRP ee ay soo saartay habka aan kor ku soo sheegnay waa sahlan tahay in la rakibo lana hubiyo in qalabku leeyahay awoodaha kor ku xusan. Iyada oo ku saleysan baaxadda dabacsan ee FRP, waxaan soo saari karnaa alaabooyin kala duwan oo qaab gaar ah leh. Hadday tahay: tuubooyin, rakibidda tuubooyin, taargooyin indha la ', daboollo, tees, iskutallaab, fallaadho dabacsan, wareegyo, afargeesoodyo, geesiyaal, iwm, dhammaantood waa la soo saari karaa iyadoo loo eegayo sawirrada!
Hore: FRP rakibidda tuubooyinka tuubooyinka
Xiga: Dhuumaha Dhuxusha FPP
Dhuunta Anti-Static ee Frp
Frp Biibiilaha Laba-Lakabka ah
Frp Tuubada Saliidda
Frp biibiilaha Jacking
Frp Sand Filter tuuboyinka
Frp Dhuumaha Sand
Frp Dhuumaha Saddex-Lakab
Frp Dabaysha Geedi socodka